अफगानिस्तानविरुद्ध ईम र धनबहादुर घाइते! | Hamro Khelkud
अफगानिस्तानविरुद्ध ईम र धनबहादुर घाइते!
नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोलीका कप्तान ईम बहादुर मगर र ओपन स्पाइकर धनबहादुर भट्ट क्षेत्री अफगानिस्तानविरुद्ध भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा घाइते भएका छन् ।
चौथो सेटको अन्तिम समयमा खुट्टामा समस्या आएपछि ईम बाहिरिएका थिए । उनले खेल्ने क्रममा केहि असहज महसुस भएपछि बाहिर निस्कन प्रशिक्षकलाई भनेका थिए । खेलपछि प्रशिक्षक हान एबिङले पनि ईमले बाहिर आउँछु भन्नु सामान्य नरहेको बताए । ‘ईमले जब बाहिर निस्कन्छु भने मलाई लाग्यो केहि गम्भीर समस्या छ । उनी निकै जब्बर खेलाडी हुन्, यसै मैदानबाट बाहिर निस्किने प्रकृतिका छैनन् । अब हामीले उनको चोटलाई गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ, उनले थपे ।
चोट बोकेलगत्तै बाहिर निस्केर फिजियोसँग रहेका ईम खेल सक्कुन्जेल सम्म पनि त्यहीं थिए । ईमलाई खेल सकिएलगत्तै थप परिक्षणका लागि अस्पताल लागिएको र उनको मांशपेशीमा केहि समस्या देखिएको व्यवस्थापक मंगल श्रेष्ठले हाम्रो खेलकुदलाई जानकारी दिए । ‘उनको मांशपेशीमै समस्या देखिएको प्रारम्भिक परिक्षणमा देखिएको छ । विस्तृत रिपोर्ट आउन बाँकी छ । आशा गरौँ केहि गम्भीर समस्या छैन, ‘ श्रेष्ठले भने, ‘अब प्रतियोगितालाई तयारी राख्न भएपनि उनीमाथि जोखिम मोल्ने देखिन्न । सम्भवत उनले भोलीको खेललाई विश्राम गर्नेछन् ।’
ईमसँगै धनबहादुरले पनि अफगानिस्तानविरुद्ध खेलमा चोट बोके । अफगानी खेलाडीले स्पाइक गरेपछि ल्यान्ड गर्ने क्रममा उनको खुट्टामा परेपछि धनबहादुरको कुर्कुच्चानिर चोट लागेको हो । खेलदौरान नै सामान्य दुखाइ भएपनि स्प्रे गरेर खेलेका उनको खुट्टा खेलपछि केहि सुन्निएको थियो । उनको प्रारम्भिक परिक्षणमा केहि समस्या देखिएको छैन । यद्यपि उनलाई पनि विश्राम दिने सम्भावना रहेको छ ।
ईम र धनबहादुर दुवैले पहिलो खेलमा नेपालले जित दर्ता गर्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । नेपालले दोस्रो खेल बिहीबार ३ बजे अफगानिस्तानसँग खेल्नेछ । खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हाम्रो खेलकुद डट कमले गर्नेछ ।